Degso Windows 11 loogu talagalay Windows
Degso Windows 11
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (4915.20 MB)
Degso Windows 11,
Windows 11 waa nidaamka hawlgalka cusub ee Microsoft soo bandhigtay sida jiilka xiga ee Windows. Waxay la timaadaa qaabab badan oo cusub, sida soo dejinta iyo socodsiinta barnaamijyada Android ee kombiyuutarka Windows, cusboonaysiinta Kooxaha Microsoft, menu-ka Bilowga, iyo muuqaal cusub oo ay ku jiraan naqshad nadiif ah iyo Mac u eg. Waxaad isku dayi kartaa nidaamkii ugu dambeeyay ee Microsoft adigoo soo dejinaya faylka ISO 11. Waxaad si ammaan ah uga soo dejisan kartaa Windows 11 ISO beta (Horudhaca Insider Windows 11) Softmedal oo leh taageero luqadda Turkiga.
Xusuusin: Falanqeynta Gudaha ee Windows 11 waxaa ku jira daabacaadyada Guriga, Pro, Waxbarashada, iyo Guriga Luqadda Kaliya ah. Markaad gujiso badhanka Soo dejinta Windows 11 ee kore, waxaad soo dejisan doontaa Windows 11 Falanqaynta Insider (Beta Channel) Ku dhis 22000.132 af Turki ah.
Soo degso Windows 11 ISO
Nidaamka hawlgalka Windows 11 wuxuu la imanayaa qaabab badan oo cusub, halkan waxaa ah dhowr ka mid ah hal -abuurnimada caanka ah:
Cusub, ka sii badan oo u eg Mac - Windows 11 waxay leedahay naqshad nadiif ah oo leh geesaha wareegsan, midabada pastel, iyo menu bilowga dhexe iyo Taskbar.
Barnaamijyada isku dhafan ee Android - Barnaamijyada Android ayaa imanaya Windows 11, oo diyaar u ah in laga soo dejiyo Dukaanka Microsoft ee cusub iyada oo loo sii marayo Amazon Appstore. (Waxaa jiray dhowr siyaabood oo adeegsadayaasha taleefanka Samsung Galaxy ay ku heli karaan barnaamijyada Android gudaha Windows 10, hadda waxay u furan tahay adeegsadayaasha aaladdaas.)
Widgets - Hadda widgets (widgets) si toos ah ayaa looga heli karaa Taskbar -ka waxaadna u habayn kartaa si aad u aragto waxaad rabto.
Isdhexgalka Kooxaha Microsoft - Kooxuhu waxay helayaan hagaajin oo si toos ah loogu dhex daray Windows 11 Taskbar, taasoo sahlaysa in la helo. (Sida Apples FaceTime) Kooxaha ayaa laga heli karaa Windows, Mac, Android iyo iOS.
Teknolojiyadda Xbox ee ciyaar -wanaagga - Windows 11 waxay qaadataa astaamo gaar ah oo laga helay consoles -ka Xbox sida Auto HDR iyo DirectStorage si loo hagaajiyo ciyaartaada Windows PC -gaaga.
Taageero desktop -ka ka fiican oo fiican - Windows 11 ayaa kuu oggolaaneysa inaad sameysato miisaska macmiilka sida macOS adigoo u beddelaya miisaska badan shaqsi, shaqo, iskuul ama ciyaar ciyaar. Waxaad si gooni ah ugu beddeli kartaa gidaarkaaga miis kasta oo dalwaddii ah.
Si sahlan uga beddelidda kormeeraha ilaa laptop iyo hawlo badan oo badan - Nidaamka hawlgalka cusub wuxuu ka kooban yahay Kooxaha Snap iyo Layouts Snap (aruurinta barnaamijyada aad adeegsato ee ku xidha bar -hawleedka oo waa la dhalan karaa ama la yarayn karaa isku mar si loogu beddelo hawl fudud).
Windows 11 Download/Rakibaadda
Ka dib markaad soo dejiso faylka ISO, waxaad ku rakibi kartaa hagaajin ama ikhtiyaarrada rakibidda nadiifka ah. Si kor loogu qaado Windows 10 ilaa Windows 11, raac talaabooyinka hoose:
Kor u qaadistu waxay kuu oggolaaneysaa inaad keydiso faylashaada, dejimahaaga iyo codsiyadaada inta aad u cusbooneysiinayso dhisme cusub oo Windows ah.
Soo dejiso ISO ku habboon rakibaaddaada Windows.
Ku keydi meel kombuyuutarkaaga ah.
Fur File Explorer, u gudub meesha ay ISO ku kaydsan doonto, oo laba jeer guji faylka ISO si aad u furto.
Waxay ku dhejin doontaa sawirka si aad u gasho faylasha gudaha Windows.
Laba-guji faylka Setup.exe si aad u bilowdo hawsha rakibidda.
Xusuusin: Hubi inaad hubiso ikhtiyaarka Hayso dejinta Windows, faylasha shaqsiyeed iyo barnaamijyada” inta lagu guda jiro rakibidda.
Raac tallaabooyinka hoose si aad u nadiifiso rakibidda Windows 11:
Ku -rakibid nadiif ah ayaa tirtiri doonta dhammaan faylasha, dejinta iyo barnaamijyada ku jira aaladdaada inta la rakibayo.
Haddii aad rabto inaad abuurto USB bootable ah, tixraac tallaabooyinkan.
Xusuusin: Guji beddel waxa aad hayso” inta lagu jiro rakibidda.
Guji waxba” shaashadda xigta si aad u dhammaystirto rakibidda nadiifta ah.
Daaqadaha Windows 11
Waa inaad ku rakibtaa Dhismaha Horudhaca Insider ee Windows 11 aalad hore loogu hawlgeliyay Windows ama furaha wax soo saarka Windows, ama aad ku darto Koonto Microsoft oo leh ruqsadda dijitaalka ee liisanka Windows -ka ee ku xiran ka dib nadiifin nadiif ah.
Windows 11 Shuruudaha Nidaamka
Shuruudaha nidaamka ugu yar si loo rakibo loona socodsiiyo Windows 11:
Processor: 1GHz ama ka dhaqso badan, 2 ama in ka badan, cores, 64-bit processor ama system-on-chip (SoC) ku habboon
Xasuusta: 4GB ee RAM
Kaydinta: 64GB ama aalad kaydinta ka weyn
Qalabka nidaamka: UEFI oo leh Boot aamin ah
TPM: Module Platform Module (TPM) nooca 2.0
Garaafyada: DirectX 12 garaafyada la jaan qaada / WDDM 2.x
Muujin: In ka badan 9 inji, qaraar HD (720p)
Xiriirka Internetka: Koontada Microsoft iyo isku xirka internetka ayaa looga baahan yahay rakibidda Guriga Windows 11.
Windows 11 Noocyada
Cabirka Faylka: 4915.20 MB
Wararkii Ugu Dambeeyay: 24-08-2021
Codsiga CrystalDiskMark, waxaad ku cabbiri kartaa xawaaraha akhriska iyo qoraalka ee HDD ama SSD...
Soo dejiso Tencent Gaming Buddy oo ku raaxeyso ku ciyaarida PUBG Mobile, Brawl Stars iyo ciyaaraha...
Haddii aad la yaaban tahay waxa ku jira kombiyuutarkaaga, waa kan Speccy, barnaamij bandhig...
Soo dejiso KMSpico, bilaash Windows activation, barnaamijka hawlgelinta Office. Maxay Tahay Inaad...
Daryeelka Wadaha Wise waa barnaamij casriyeyn darawalnimo oo lacag laaan ah oo loo heli karo...
Microsoft Visual C ++ Xidhmada Dib-u-Qaybinta ee Visual Studio 2015, 2017, iyo 2019 waa xirmo aad u...
IObit Darawalka Booster 8 waa barnaamij bilaash ah oo u oggolaanaya helitaanka darawallada,...
Xulashada Midabka Shaashadda waa barnaamij qabasho koodh midab midab leh oo aad waxtar u leh oo aad...
EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition Free Edition waa barnaamij soo kabashada faylka oo ka...
Microsoft Visual C ++ 2005 waa xirmo isku keenaya maktabadaha Visual C ++ ee ay u baahan yihiin...
CCleaner waa nidaam ku guuleystey nidaamka hagaajinta iyo amniga oo sameyn kara nadiifinta...
Markaad soo degsato Advanced SystemCare, waxaad yeelan doontaa barnaamij ku habboon nidaamka oo ka...